'दुई कम्युनिष्ट मिले अब के होला ?' भन्ने देउवाको प्रश्नमा यस्तो थियो चित्रबहादुरको जवाफ
कपिलवस्तु, २८ कात्तिक -पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहितका वामपन्थी दल मिल्दा सबैभन्दा ठूलो भुइँचालो नेपाली काँग्रेसमा आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
राणा शासन र राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याएका नेपाली जनताले कम्युनिस्टले ल्याउने अधिनायकवाद पनि सहन नसक्ने भन्दै काँग्रेसलाई अनावश्यक चिन्ता नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारको स्वाद चाख्न बानी परेको दलमा वामपन्थीले बहुमत ल्यायो भने सरकारमा जान पाइन्न भनेर हल्लीखल्ली मच्चिएको टिप्पणी गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग भएको एक भेटको स्मरण गराउनुभयो ।
आफूले त्यस भेटमा ‘वामपन्थी मिले, ठीक भयो, तर देशमा कम्युनिस्ट शासन आउँछ भन्ने चिन्ता नगर्नू’ भनेर जवाफ फर्काएको उहाँले बताउनुभयो ।
भीडलाई तितरबितर पारेर प्रहरी डा. केसीको अनशनस्थलमा, हेलिकप्टरमा काठमाडौं लगिँदै
कांग्रेस : विधान मस्यौदा समिति गठन हुँदै